Vokatra Golf Golfmpanamboatra sy mpamatsy | Feyond
Home > Products > Vokatra Golf Golf
Eto ianao dia afaka mahita ny fonon-doha golf, fonon-doha golf, fonon-doha golf, fonon-tanana golf, kitapo golf, kiraro golf, kiraro golf, golf, golf, sy ny ombidia Ny volanao mahazatra sy ny sarinao, ny sasany dia manana tahiry sy ny sasany, raha tsy afaka mampiseho ny antsipiriany ilainao ny famaritana, azonao atao ny miantso anay amin'ny +8618813984783 na alefaso amin'ny mailaka i Angelyanggolf@outlook.com.
Sarony tampon-doha vy Golf avo lenta 深圳 市 飞 羊 运动 用品 有限公司
Ny mampiavaka ny Golf Iron Headcover; Ny tena asan'ity fonon-doha vy ity dia ny fiarovana ny klioba golf tsy ho simba mandritra ny dia an-kalamanjana! Ampitomboy ny ain'ny fanompoana vy! Ity karazana Golf headcover vy ity dia misy fitaovana roa, izy ireo dia PU sy Neoprene; Ity fonosana vy ity dia manana loko 5 hisafidiananao, hamaly ny filan'ny olona samy hafa amin'ny loko! Mazava ho azy, raha tianao ny loko hafa, dia miarahaba anao izahay manafatra! Ny takelaka rehetra dia manana isa ambony mba hifanaraka amin'ny vy golf (3,4,5,6,7,8,9, A, SW, PW) .Ny vokatra ity dia natao tamin'ny endrika kely sy tsara tarehy, mety entina, miaraka 10 karazana lohan-doha isan-karazany, safidy mety indrindra ho an'ireo tia golf. Ity fehiloha vy golf ity dia mety amin'ny marika sy haben'ny vy golf club loha, miaraka amin'ny fanapahana, famolavolana ary kalitao avo lenta! Aorian'ny nametrahanao ny palitao vy dia miafina ao anaty tombo-kase ilay Velcro, izay mety tsy ho mora milatsaka sy ho very! Satria miafina ny Velcro, noho izany tsy misy akony amin'ny hatsarana ankapobeny! Mino aho fa io no safidinao tsara indrindra! Ny antsipirian'ny Golf Club Iron Head Protector; Haben'ny fonosana tokana: Approx.17X12X20 cm (L * W * T) Loko: fitaovana PU (fotsy, mainty,); fitaovana neoprene (mainty, mena, manga, fotsy, volondavenona, mavokely) Misy fonosana: 10Pcs / set Iron Headcovers, iray napetraka / Opp Bag Fitaovana: Neoprene, PU MOQ: 100 set Lanja lehibe tokana: 0.360 kg
Mpamatsy fanarontsaronana Golf tsara indrindra
Ity taratasy ity dia manolotra ny antsipiriany sy ny endri-javatra an'ny Golf Headcover Protector, ny tena asan'ity fonon-doha vy ity dia ny fiarovana ny klioban'ny golf amin'ny fahasimbana mandritra ny dia an-kalamanjana! Ampitomboy ny ain'ny fanompoana vy! Ity karazana Golf headcover vy ity dia misy fitaovana roa, izy ireo dia PU sy Neoprene; Ity fonosana vy ity dia manana loko 5 hisafidiananao, hamaly ny filan'ny olona samy hafa amin'ny loko! Mazava ho azy, raha tianao ny loko hafa, dia miarahaba anao izahay manafatra! Ny takelaka rehetra dia manana isa ambony mba hifanaraka amin'ny vy golf (3,4,5,6,7,8,9, A, SW, PW) .Ny vokatra ity dia natao tamin'ny endrika kely sy tsara tarehy, mety entina, miaraka 10 karazana lohan-doha isan-karazany, safidy mety indrindra ho an'ireo tia golf. Ity fehiloha vy golf ity dia mety amin'ny marika sy haben'ny vy golf club loha, miaraka amin'ny fanapahana, famolavolana ary kalitao avo lenta! Aorian'ny nametrahanao ny palitao vy dia miafina ao anaty tombo-kase ilay Velcro, izay mety tsy ho mora milatsaka sy ho very! Satria miafina ny Velcro, noho izany tsy misy akony amin'ny hatsarana ankapobeny! Mino aho fa io no safidinao tsara indrindra! Haben'ny fonosana tokana: Approx.17X12X20 cm (L * W * T) Loko: fotsy, mainty Misy fonosana: 10Pcs / set Iron Headcovers, iray napetraka / Opp Bag Fitaovana: PU MOQ: 100 set Lanja lehibe tokana: 0.360 kg
Mpanamboatra fonosana manga Golf Blue
Ny tena asan'ity fonon-doha vy ity dia ny fiarovana ny klioban'ny golf amin'ny fahasimbana mandritra ny dia an-kalamanjana! Ampitomboy ny ain'ny fanompoana vy! Ity karazana Golf headcover vy ity dia misy fitaovana roa, izy ireo dia PU sy Neoprene; Ity fonosana vy ity dia manana loko 5 hisafidiananao, hamaly ny filan'ny olona samy hafa amin'ny loko! Mazava ho azy, raha tianao ny loko hafa, dia miarahaba anao izahay manafatra! Ny takelaka rehetra dia manana isa ambony mba hifanaraka amin'ny vy golf (3,4,5,6,7,8,9, A, SW, PW) .Ny vokatra ity dia natao tamin'ny endrika kely sy tsara tarehy, mety entina, miaraka 10 karazana lohan-doha isan-karazany, safidy mety indrindra ho an'ireo tia golf. Ity fehiloha vy golf ity dia mety amin'ny marika sy haben'ny vy golf club loha, miaraka amin'ny fanapahana, famolavolana ary kalitao avo lenta! Aorian'ny nametrahanao ny palitao vy dia miafina ao anaty tombo-kase ilay Velcro, izay mety tsy ho mora milatsaka sy ho very! Satria miafina ny Velcro, noho izany tsy misy akony amin'ny hatsarana ankapobeny! Mino aho fa io no safidinao tsara indrindra! Haben'ny fonosana tokana: Approx.17X12X20 cm (L * W * T) Loko: Manga; Misy fonosana: 10Pcs / set Iron Headcovers, iray napetraka / Opp Bag Fitaovana: Neoprene MOQ: 100 set Lanja lehibe tokana: 0.360 kg
China Mallet putter manarona mpanamboatra-
Ny fiasan'ny PU Skin Golf Putter Headcover; Ny karazana sarona loha kintana puty kintana 5 dia manana endrika roa, saingy azonao atao ihany koa ny manamboatra ny endrikao. Manana ekipa mpamorona matihanina manokana izahay! Raha mbola tianao atao dia afaka manampy anao hahatratra izahay! Ao anatiny miaraka amin'ny lamba landihazo malefaka, Label: vita amin'ny sinoa; ivelan'ny fitaovana PU, kintana ny peta-kofehy! Tsara tarehy ny famoronana kintana 5 sy ny famolavolana akaiky andriamby, mora ny manokatra sy manidy! Rehefa mivoaka any ivelany ianao ary mametraka ny kliobanao ao anaty kitapo golf, dia mila fonosana matanjaka sy azo ampiharina ho an'ireo kliobanao rehetra ianao hisorohana azy ireo amin'ny fiantraikany sy ny fikikisana, hanafoanana ny fikikisana. Ny mpilalao golfa rehetra dia hisafidy ny headcovers tiany ho an'ny kliobany lafo vidy. Aza adino ny mividy ny sarona ho an'ireo kliobanao. Mila manomana iray amin'ireo kliobanao ianao ary mitazona azy ireo vaovao !! Ka mila fonosana golf Feyond ianao, afaka miaro ny kliobanao amin'ny ding sy fahasimbana mitranga mandritra ny lalao na ny dia io. Ny antsipirian'ny Magnetic Closure Golf Putter Headcover; Milanja: 350g eo ho eo MOQ: 100 pcs Sokajy vokatra: fonony putter golf miendrika L Size: 16 * 16 * 7cm Fitaovana: lamba tsy misy rano PU ambonin'ny tany, plush matevina ao anatiny Lisitry ny fonosana: Sarona «putter golf» miendrika L * 1 Marika: Feyond Golf fanidiana: andriamby Craft LOGO: Applique
Feyond Skeleton sy rivet magnet putter headcover
Feyond Skeleton sy rivet magnet putter headcover. Ny fiasan'ny PU Skin Golf Putter Headcover; Ny karazana fonosana loha-bolongam-bonitra Skeleton sy rivet dia manana endrika miloko 1 ankehitriny, fa azonao atao ihany koa ny manamboatra ny endrinao. Manana ekipa mpamorona matihanina manokana izahay! Raha mbola tianao atao dia afaka manampy anao hahatratra izahay! Ao anatiny miaraka amin'ny lamba landihazo malefaka, Label: vita amin'ny sinoa; ivelan'ny fitaovana Pu, kintana ny peta-kofehy! Volavola tsara tarehy sy rivet tsara tarehy ary famolavolana akaiky andriamby, mora ny manokatra sy manidy! Rehefa mivoaka any ivelany ianao ary mametraka ny kliobanao ao anaty kitapo golf, dia mila fonosana matanjaka sy azo ampiharina ho an'ireo kliobanao rehetra ianao hisorohana azy ireo amin'ny fiantraikany sy ny fikikisana, hanafoanana ny fikikisana. Ny mpilalao golfa rehetra dia hisafidy ny headcovers tiany ho an'ny kliobany lafo vidy. Aza adino ny mividy ny sarona ho an'ireo kliobanao. Mila manomana iray amin'ireo kliobanao ianao ary mitazona azy ireo vaovao !! Ka mila fonosana golf Feyond ianao, afaka miaro ny kliobanao amin'ny ding sy fahasimbana mitranga mandritra ny lalao na ny dia io. Milanja: 350g eo ho eo MOQ: 100 pcs Sokajy vokatra: fonony putter golf miendrika L Size: 16 * 16 * 7cm Fitaovana: lamba tsy misy rano PU ambonin'ny tany, plush matevina ao anatiny Lisitry ny fonosana: Sarona «putter golf» miendrika L * 1 Marika: Feyond Golf fanidiana: andriamby Craft LOGO: Applique